လာပါ၊ သခင်ယေရှု၊ ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာချီဘုရားကျောင်း
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ 2018-02 > လာကြ, သခင်ယေရှုခရစ်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလောကရှိဘဝကိုအလွန်စိုးရိမ်ကြသည်။ နေရာတိုင်းမှာမူးယစ်ဆေးဝါးတွေ၊ နိုင်ငံခြားသားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတွေ၊ နိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေကြောင့်နေရာတိုင်းမှာပြproblemsနာတွေရှိနေတယ်။ ထို့နောက်ဆင်းရဲမွဲတေမှု၊ ပျောက်ကင်းနိုင်သောရောဂါများနှင့်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုတို့ရှိနေသည်။ ကလေးညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများ၊ လူကုန်ကူးမှုနှင့်မတရားအကြမ်းဖက်မှုများရှိသည်။ နျူကလီးယားလက်နက်များ၊ စစ်ပွဲများနှင့်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများတိုးပွားလာခြင်းမှာစိုးရိမ်စရာဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည်မကြာမီနှင့်မကြာမီမလာမချင်းဤပြtoနာအတွက်အဖြေမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်ခရစ်ယာန်များသည်ယေရှုကြွလာတော်မူခြင်းနှင့်“ လာကြ၊ သခင်ကြွလာလော့” ဟုဆုတောင်းရန်တောင့်တခြင်းသည်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
ခရစ်ယာန်များသည် ယေရှု၏ကတိထားရာ ပြန်လာခြင်းကို ယုံကြည်ကြပြီး ဤပရောဖက်ပြုချက်၏ ပြည့်စုံမှုကို မျှော်လင့်ကြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်များကို အနက်ဖွင့်ခြင်းသည် မမျှော်လင့်ထားသည့်နည်းလမ်းများဖြင့် ပြည့်စုံသွားသောကြောင့် ရှုပ်ထွေးသောကိစ္စတစ်ခုအဖြစ် ပေါ်လာသည်။ ပရောဖက်များပင်လျှင် ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ။ ဥပမာ၊ မေရှိယသည် ကလေးအဖြစ် မွေးဖွားလာပြီး လူသားနှင့် ဘုရားသခင် မည်သို့ဖြစ်လာမည်ကို သူတို့မသိခဲ့ကြပေ။1. ဓာတ်ဆီ 1,10စာ-၁၂)။ ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်နှင့် ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်၊ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအတွက် အသေခံပြီး ဘုရားသခင်ဖြစ်ဆဲဖြစ်ရန် မည်သို့လုပ်ဆောင်သင့်သနည်း။ တကယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှသာ နားလည်နိုင်မှာပါ။ သို့သော် ထိုစဉ်ကပင် ပညာတတ် ယဇ်ပုရောဟိတ်များ၊ ကျမ်းပြုဆရာများနှင့် ဖာရိရှဲများ နားမလည်ခဲ့ကြပါ။ သခင်ယေရှုကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် လက်ခံမည့်အစား ကိုယ်တော်ကို သတ်ရန်ရှာကြသည်။
ပရောဖက်ပြုချက်သည် အနာဂတ်တွင် မည်သို့ဖြစ်လာမည်ကို ခန့်မှန်းရန် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပေမည်။ သို့ရာတွင် ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းကို ပြုပြင်ခြင်းသည် ပညာရှိမဟုတ်၊ အထူးသဖြင့် အဆုံးကာလနှင့်ပတ်သက်သော ပညာရှိမဟုတ်ပေ။ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာမည့်ရက်အတိအကျကို ကိုယ်တိုင်ကြွေးကြော်ထားသော ပရောဖက်များက ကြိုပြောခဲ့သော်လည်း ယခုအချိန်အထိ ၎င်းတို့အားလုံး မှားယွင်းနေပါသည်။ အဲဒီလို့ဘာဖြစ်လို့? အကြောင်းမှာ သမ္မာကျမ်းစာသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဤအရာများအတွက် အချိန်၊ နာရီ သို့မဟုတ် နေ့ကို မသိနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည် (တ 1,7; မဿဲ ၂4,36; Mk. ၁3,32) ခရစ်ယာန်များကြားတွင် ဤသို့ကြားနေရသည်– “ကမ္ဘာ့အခြေအနေက ပိုဆိုးလာတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခုနောက်ဆုံးရက်အနည်းငယ်အတွင်း နေထိုင်လျက်ရှိသည်မှာ သေချာပါသည်။” ဤအတွေးများသည် ရာစုနှစ်များတစ်လျှောက် ခရစ်ယာန်များနှင့်အတူ လိုက်ပါလာခဲ့သည်။ သူတို့အားလုံးသည် ပြီးခဲ့သည့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်း အသက်ရှင်နေသကဲ့သို့ ခံစားခဲ့ကြရပြီး ထူးဆန်းသည်မှာ မှန်ပါသည်။ “နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်များ” သည် ယေရှုမွေးဖွားခြင်းနှင့်အတူ စတင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ခရစ်ယာန်များသည် သခင်ယေရှု ပထမဆုံးကြွလာချိန်မှစ၍ နောက်ဆုံးသောကာလတွင် အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ပေါလုသည် တိမောသေအား “နောက်ဆုံးသောကာလ၌ ခံရလိမ့်မည်” ဟုတိမောသေအား ပြောသောအခါ၊2. တိမောသေ 3,1) သူသည် အနာဂတ်အတွက် တိကျသော အချိန် သို့မဟုတ် နေ့အကြောင်းကို မပြောပါ။ ပြီးခဲ့သောရက်အနည်းငယ်တွင် လူတို့သည် မိမိကိုယ်ကို အထင်ကြီးကြပြီး လောဘကြီးသူ၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သူ၊ ပုတ်ခတ်ပြောဆိုသူ၊ ကျေးဇူးကန်းသူ၊ ထို့နောက် “ထိုကဲ့သို့သောလူများကို ရှောင်ကြဉ်ပါ” ဟု သတိပေးခဲ့သည်။2. တိမောသေ 3,2စာ-၅)။ ထင်ရှားသည်မှာ ထိုကဲ့သို့သောလူများ သည် ထိုအချိန်က ရှိသင့်သည်။ ပေါလုသည် အသင်းတော်ကို ၎င်းတို့နှင့်ဝေးဝေးနေရန် အဘယ်ကြောင့် ညွှန်ကြားသနည်း။ မဿဲ ၂4,67 လူမျိုး​တို့​သည် တစ်​ဦး​နှင့်​တစ်​ဦး​ထ​မြောက်​ကြ​ပြီး စစ်​များ​စွာ​ရှိ​ကြ​လိမ့်​မည်​ဟု​ငါ​တို့​ကြား​ရ​၏။ ဒါက အသစ်အဆန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာမှာ စစ်မရှိတဲ့အချိန်က ဘယ်တုန်းကလဲ။ အချိန်တွေက အမြဲဆိုးနေပြီး၊ ပိုဆိုးမလာဘဲ ပိုဆိုးလာတတ်ပါတယ်။ ခရစ်တော် မကြွလာခင်မှာ ဘယ်လောက်ဆိုးဆိုးရွားရွား ဖြစ်ပါစေလို့ တွေးမိပါတယ်။ ကျွန်တော်မသိပါ။
ပေါလုဤသို့ရေးသားခဲ့သည်– “မတရားသောသူနှင့် လှည့်ဖြားသောသူတို့မူကား၊ ကြာလေလေ၊ ယုတ်မာလေဖြစ်၏” (2. တိမောသေ 3,13) ဆိုးသည်နှင့်အမျှ ပေါလုက ဤသို့ဆက်ပြောသည်– “သင်သင်ယူပြီးသည်နှင့် သင့်အားအပ်နှင်းထားသောအရာကို သင်၌တည်နေ၏” (2. တိမောသေ 3,14).
တစ်နည်းဆိုရသော် မည်မျှပင်ဆိုးရွားပါစေ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်ကို ဆက်လက်ယုံကြည်နေသင့်သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျမ်းချက်များမှ သိရှိပြီး သင်ယူသောအရာများကို လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်ကြားတွင်၊ ဘုရားသခင်သည် လူတို့ကို မကြောက်ရန် အမြဲပြောထားသည်။ "မကြောက်ပါနဲ့!" (ဒံယေလ 10,12။၁၉)။ မကောင်းသောအရာများ ဖြစ်ပေါ်လာသော်လည်း ဘုရားသခင်သည် အရာအားလုံးကို အုပ်စိုးသည်။ ယေရှုက “သင်တို့သည် ငါ့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေခြင်းငှာ ဤစကားကို ငါပြောပြီ။ ဤလောက၌ သင်သည် ကြောက်တတ်၏။ ရွှင်လန်းသောစိတ်ရှိလော့၊ ငါသည် ဤလောကကို အောင်ပြီ” (ယော၊ ၁6,33).
"လာ၊ ယေရှု၊ လာ" ဟူသော စကားလုံးကို ကြည့်ရန် နည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိသည်။ ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာခြင်းကို တောင့်တခြင်းကို ဖော်ပြသည်။ ဒုတိယ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုတောင်းချက်မှာ ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် "အာမင်၊ ဟုတ်ကဲ့၊ ကြွလာပါ၊ သခင်ယေရှု" (ဗျာဒိတ် ၂2,20).
«ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏နှလုံးသားကိုယုံကြည်ကိုးစားပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျိန်းဝပ်တော်မူသည်။ မင်းကိုပိုသိအောင်ကူညီပါ ဒီဖရိုဖရဲကမ္ဘာထဲမှာမင်းရဲ့ငြိမ်သက်မှုကိုပေးပါ။
ခရစ်တော်နှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အချိန် ပို၍ ယူကြပါစို့။ သို့ဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာ၏အဆုံးကိုစိုးရိမ်ရန်မလိုပါ။